Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa jeediyay haddal hanjabaad iyo soo dhaweysasho isugu jira. |
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa jeediyay haddal hanjabaad iyo soo dhaweysasho isugu jira.
Waxa kale oo uu sheegay in koox ciyaartooy ah u diri doonaan magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed, islamarkaasna wada xaajood gali doonaan labada dal.
Trump iyo Kim Jong-un oo markale foodda is daray
Ciyaartooyda Kuuriyada Waqooyi ee BarafkaLahaanshaha sawirkaREUTERS
Ciyaartooyda Kuuriyada Waqooyi ee Barafka
Madaxa ciyaaraha olimbikada ee Kuuriyada Koonfureed Lee Hee-beom ayaa wakaaladda wararka dalkaas u sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay hadalka Kim ee ah in koox ciyaaraha ka qeyb qaata lasoo dirayo, isaga oo ku tilmaamay in ay ka dhigantahay sidii haddiyad qof loo keenay sanadka cusub awgiis.
Labada ciyaartooy ee kaliya ee u barmoostay in ay ka qeybqaadan karaan ciyaaraha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu kala magacaabaa Ryom Tae-Ok iyo Kim Ju-Sik. Waxayna aad ugu xeeldheeryihiin ciyaaraha barafka.
Inkasta oo Kuuriyada Waqooyi ay geftay waqtigii loogu talogalay in ay ci